Susa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa: unganciphisa kanjani isisindo sezulu esimweni esihle | Amadoda aSitayela
Unganciphisa kanjani isisindo ngaphandle kokudla ngaphambi kokufika kwesimo sezulu esihle
Lapho ukushisa kuqala futhi siqala ukunciphisa izingubo esizigqokayo, sithola izakhiwo mayelana namafutha esiwaqoqe ebusika. Abantu abaningi bafuna ukuqala ukulahlekelwa ngamafutha, kepha ukunciphisa umzimba akuyona inketho yawo wonke umuntu. Namuhla kungenzeka khipha amafutha ngaphandle kokuhlinzwa ngenxa yokwelashwa okuhlukahlukene komzimba. Kodwa-ke, yizindlela zokwelapha ezikhethekile okufanele zenziwe ngabachwepheshe abangochwepheshe emkhakheni.
Ngakho-ke, kule ndatshana sikutshela ukuthi kanjani ulahlekelwe amafutha ngaphandle kokuhlinzwa.
1 Unganciphisa kanjani isisindo ngaphandle kokudla
2 Susa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa ngamakhaza
4 Radiofrequency ukususa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa
Unganciphisa kanjani isisindo ngaphandle kokudla
Siyazi ukuthi ukudla kuyingxenye ebalulekile yokunciphisa amafutha emizimba yethu. Khumbula ukuthi ngaphandle kokushoda kwekhalori ekudleni kwethu ngeke silahlekelwe ngamafutha. Inketho eyodwa ukuhamba nokusebenza ukuze senze izindleko zamandla ngaphezu kwalokho esikudlayo ngokudla. Noma kunjalo, siyazi ukuthi ngokwemvelo asikwazi ukulahlekelwa ngamafutha asendaweni. Yizakhi zofuzo zethu ezizokhetha ukuthi uzokhetha kuphi amafutha avuthayo. Kunabantu abavame ukugcina wonke amanoni esiswini, kanti abanye bawagcina emilenzeni nasemhlane.
Ukuze ulahlekelwe ngamafutha ngaphandle kokuhlinzwa, kunezindlela ezahlukahlukene zokwelashwa okungezona ezihlasela okunikeza imiphumela emangalisayo. Abantu abaningi bayakuzonda ukudlula egumbini lokuhlinza ngenhloso yobuhle. Lokhu akusadingeki njengoba kukhona ezinye izindlela zokwelapha Zisetshenziselwa ukuqeda amafutha omzimba ngobuchwepheshe obusha. Obunye balobu buchwepheshe obusha buyakwazi ukuhlasela amaseli anamafutha kusetshenziswa ukushisa okukhulu noma amakhaza ukuwaqeda.
Susa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa ngamakhaza
Khumbula ukuthi ukuze silahlekelwe ngamafutha nokudla kwesimo sezulu esihle sidinga ukuzibeka esandleni songoti. Lezi zingcweti ziphethe ukuhlola isimo sethu nokubheka indlela eyiyo yokulahlekelwa ngamafutha. Susa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa Kulezi zinsuku kungenzeka sibonga ukwelashwa kokunciphisa amafutha ngamakhaza athatha cishe ihora ngeseshini ngayinye. Ngaleli hora isiguli sikhululeke ngokuphelele futhi akukho nokukhathazeka okukhona. It iwubuchwepheshe obuphambili bokupholisa obusiza ekuqedeni ngokukhetha ukuqeda amangqamuzana amafutha emzimbeni.
Uma siqongelele amafutha esiswini, kungagcizelelwa kule ndawo ukuqeda la maseli anonile. Inqubo ingokwemvelo ngokuphelele futhi ihamba kancane ukuze ingalimazi isikhumba. Ngalokho, Amafutha asendaweni ancishisiwe ngaphandle kokuhlinzwa ngokufaka ingcindezi emnene yomshini endaweni ezolashwa. Ngale ndlela, ibeka amangqamuzana amafutha endaweni yokupholisa elawulwayo egcina iwasuse.
Ngenye indlela yokususa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa. Kuyindlela yokwelashwa kwamafutha ngokushisa futhi kwenziwa ngenxa ye-SculpSure reducer laser. Isikhathi ngasinye sihlala cishe imizuzu engama-25 nge-zone ngayinye. Abanye bathi le ndlela icasula kakhulu kunaleyo edlule eyayiphathwa ngayo ngamakhaza. Yize lokhu kwelashwa kungacasula kakhulu, kunezimo zeziguli ezingabekezelelani kakhulu nomphumela wokumunca owenziwa ekwelashweni okubandayo.
Zonke lezi zizathu zanele ukuba nokuhlolwa ngokomzimba kukaDokotela ngoba kuyisihluthulelo ukunquma umkhawulo wezinhlungu iziguli okungadingeka zithole ukwelashwa okuhle kakhulu. Yehlisa isisindo ngokuphelele, uqede izibambo zothando ezicasulayo futhi unciphise isisu ngaphandle kokuhlinzwa kungenzeka ngalezi zindlela.
Radiofrequency ukususa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa
Imvamisa yomsakazo ingenye yezindlela zokwelapha ezisetshenziswa kakhulu ukunciphisa umzimba ngaphandle kokuhlinzwa. Kulokhu, iqembu lezokwelapha libhekele ukusebenzisa amaza aphakeme kakhulu ukuthola imiphumela engcono futhi esheshayo. Enye yezinto ezibalulekile zokwelapha iziguli ezifuna ukususa amafutha ngaphandle kokuhlinzwa isivinini. Lapho nje iziguli ziqala ukubona imiphumela ngokushesha, baqala ukwaneliseka ngokwengeziwe kusukela ekuqaleni kokwelashwa.
I-radiofrequency isebenza ngokubanga ukushisa okulawulwayo kwesikhumba okuthanda ukudonsa komzimba kwe-lymphatic yomzimba. Lokhu kusho ukuthi uketshezi luzolahleka maduzane futhi ukusakazwa kwendawo yonke kuqala ukuba ngcono. Ngenxa yalokhu, ukubonakala kwesikhumba kunikezwa kimi futhi kwenziwa umsebenzi wokunciphisa amafutha omzimba.
Inzuzo enikezwa yilezi zindlela zokwelapha ukuthi ngeke uqede amafutha omzimba ngendlela ehlaselayo emzimbeni wakho. Ukudla ukudla okunempilo nokukhuthala noma ukuzivocavoca umzimba Yinto okufanele ibe kuyo yonke imikhuba yabantu yansuku zonke. Kodwa-ke, uma umgomo wakho ungobuhle futhi ungahlushwa yisiphi isifo, ngalezi zindlela zokwelapha ungasiza ukuqeda amafutha omzimba ngokushesha okukhulu futhi ngaphandle kokulimaza umzimba wakho.
Kumele nje ufake le mikhuba ejwayelekile kakhudlwana ekudleni kwakho kancane kancane ukuze ugcine ujwayele umzimba. Lapho nje usebenzisa lobu buchwepheshe ukususa amanoni kanye nemikhuba enempilo ungafinyelela impilo enhle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ungawaqeda kanjani amafutha ngaphandle kokuhlinzwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Unganciphisa kanjani isisindo ngaphandle kokudla ngaphambi kokufika kwesimo sezulu esihle